Formstack: Ulo oru Akaụntụ nke Agencylọ Ọrụ nke Agencylọ Ọrụ gị | Martech Zone
Formstack: Agencylọ Ọrụ Akaụntụ Ndị Ọrụ nke Agencylọ Ọrụ gị
Thursday, June 28, 2012 Mọnde, Jenụwarị 1, 2018 Douglas Karr
O siri ike dịka ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ site n'aka ndị ahịa na nsogbu ndebanye aha ngalaba, nsogbu ọrụ aha ngalaba, yana nsogbu akaụntụ ndị ọzọ. Kama ichere n’azu na azụ, nzukọ na ịkekọrịta ihuenyo, anyị na-enweta asambodo niile anyị chọrọ n’aka ndị ahịa anyị. Typedị ozi ahụ adịghị mma ịnọdụ ọdụ na email ma ọ bụ na faịlụ ederede n'otu ebe - yabụ anyị na-eji ya nke ọma Mpempe akwụkwọ kama.
Otu ihe atụ bụ mgbe anyị na-akwaga ndị ahịa anyị site na ọrụ nnabata gaa na nke ọzọ. Iji mee ka ihe dị mfe, anyị jidere nnweta dị mfe ụdị maka kaadị akwụmụgwọ ha na nzere ndị na-edeba aha, anyị ga - azụta akaụntụ ahụ n’aha ha ma mee ka ha kwaga na enweghị nsogbu.
Mpempe akwụkwọ na-enye usoro ikpo okwu zuru oke, yana ọbụlagodi nbanye ọzọ iji nweta data echedoro. Nke a pụtara na ọ bụrụgodị na mmadụ n'ụzọ ụfọdụ na-enweta m Mpempe akwụkwọ na akaụntụ, ha enweghị ike ịnweta ozi nzere n'amaghị paswọọdụ ọzọ. Nke a na-enyere anyị aka ịnọgide na-enwe nzere na ebe nchekwa, jiri ha mgbe ọ dị mkpa, na ịghara ichegbu onwe anyị banyere oge ndị ọzọ!
Ọ bụrụ na ị bụ ụlọ ọrụ, kpọtụrụ onye na-akwado teknụzụ anyị Mpempe akwụkwọ ịmalite akaụntụ nke gị. Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ, ezigala kaadị akwụmụgwọ gị ma ọ bụ nkọwa nbanye ha site na email, faksị, ma ọ bụ site na ekwentị… mee ka ha wulite ụdị nzere ịntanetị ebe ị nwere ike itinye ozi gị.
Tags: ụlọ ọrụgị n'ụlọnganzere onye ahịana ngalaba na-edeba aha nbanyeabanyeụlọ ọrụ na-ere ahịavault paswọọdụokwuntughe
Etu nmekorita si eme ka webinar nweta